I-Studio Apt* Isimbo seMinimalism/eBright/20' kwisikhululo seenqwelomoya - I-Airbnb
I-Studio Apt* Isimbo seMinimalism/eBright/20' kwisikhululo seenqwelomoya
I-Apt inemigangatho esi-8, unogada womgangatho woku-1 kunye negumbi lokuphumla ekwabelwana ngalo, imigangatho 2 3 4 5 ikakhulu abakhenkethi bamazwe angaphandle bafunda kwaye basebenza eHanoi ngokuhlala ixesha elide, 6 & 7th umgangatho abakhenkethi abarenta ixesha elifutshane. Ukuhlamba umgangatho we-8 kunye ne-terrace enemithi kunye nembono yesixeko. I-Apt kunye nenkqubo yokulawula ukufikelela kwiminwe kunye nokupasa, ikhamera kuzo zonke iikona kunye nonogada abangama-24/24. Ukhuseleko ngokupheleleyo & ukufikelela smart. Indawo ekufuphi neLake laseNtshona, iLungile kwisikhululo seenqwelomoya saseNoibai, umgca othe tye usembindini weChibi leHoankiem kunye neHanoi Old Quarter.
📌Ummandla: 25m2📌Igumbi lokulala: 1📌 igumbi lokuhlambela: 1📌Imeko: inefenitshala epheleleyo
Indawo: Hoang Quoc Viet Cau Giay Dítrict-isixeko saseHanoi
📌Ikhamera, iBancony, isitshixo seminwe, igumbi lesitshixo se-IC
⛱Indlela yokuphila yangoku kunye nezixhobo. Abantu bomthonyama abalungileyo ummelwane, uMalume ukhuseleko nobubele, banobuhlobo. Ndiza kukunceda ngovuyo. Abasebenzi benkonzo yegumbi bazimisele kakhulu ukukunceda ucoce.
- Indlu ibekwe kumbindi wesithili sophuhliso saseHanoi. yindawo esembindini yesithili saseHanoi. Ngoko isitalato saseHoang Quoc Viet sinayo yonke into oyifunayo ukuze ufumane abantu abasebenzayo, ukuya kwisitalato saseHieu sigcwele izitya zemveli kunye nezanamhlanje zaseHanoi. Ukutya kwesitrato, unokufumana i-Nghia Tan Market, ejikelezwe yiMyuziyam ye-Ethnographic, iLotte Central, kunye neNhat Tan Bridge.
- Isakhiwo sinokupaka simahla, Kwigumbi elinamacala ama-2 okukhanya kwendalo, Isakhiwo sikwindawo ebanzi kunye neemoto ezi-2 ziphepha omnye komnye, abamelwane abalungileyo nabaphucukileyo. Igumbi linekhitshi eligcweleyo, i-minibar, ikhabhathi, kunye nempahla yasekhitshini, isomisi, ... kwaye xa ufuna nantoni na onokuyicela i-Lyn House iya kuba ilungele ukuxhasa. Kwakhona loluphi ulwazi oludingayo malunga nesiXeko saseHanoi, siya kuba sikulungele ukukhangela kunye nokubonelela ngolwazi lokukunceda.
★Ndijonge phambili ukukwamkela ekhaya eLyn !
abantu basekuhlaleni abanobuhlobo, ubomi bokusebenza kwabantu bomthonyama
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hà Nội